Pregnancy – စာမကျြနှာ9– Healthy Life Journal
မေး. ဆရာ သမီးမှာ ကိုယ်ဝန်တစ်လရှိပါတယ်။ စိတ်ရောဂါကုဆေး (Olanzapine) သောက်နေရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်နိုင်သလားဆရာ ဖြေပေးပါနော်။ အရမ်းအရေးကြီးလို့ပါ။ တင်လတ်ဝင်း (FB) ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. Olanzapine စိတ္တဇရောဂါကုသဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ သောက်သုံးသင့်၊...
သန္ဓေတားဆေးက ဘယ်အချိန်ထိုးသင့်သလဲ . . .
မေး။ ။ တားဆေးက ရာသီလာမှ ထိုးရတာလား၊မလာခင် ထိုးလို့ရလားရှင့်။ ခရီးသွားစရာရှိလို့ Depo poveraဆေးထိုးပြီး တစ်လအကြာ နောက်တစ်လုံးထိုးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါကြောင့်ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲရှင့်။ကိုယ်ဝန်တားလောက်ပါတယ်နော် ဆရာ။ အိအိမွန်(FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ တားဆေးက ရာသီလာလာ၊ မလာလာ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း မဖြစ်စေရန်
(၁) ရေအလုံအလောက် သောက်ပါ နေ့စဉ် အရည်များများသောက်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ရေဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းရှိပိုးတွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ တစ်နေ့ရေ ခြောက်ဖန်ခွက်ခန့် သောက်သင့်တဲ့အပြင် ခရမ်ဘယ်ရီဖျော်ရည်တစ်ခွက်ကိုလည်း သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ (၂) ဗီတာမင်မှီဝဲပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မှီဝဲရတဲ့ ဗီတာမင်တွေက...
ရင်သွေးလေး ကျန်းမာသွက်လက် ဥာဏ်ရည်ထက်ဖို့ . . .(၃)
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အစားအသောက်တွေကို တန်ဆေးလွန်ဘေးစားရပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ တိရစ္ဆာန်အသည်းတွေကို မစားသင့်ပါဘူး။ ဗီတာမင်အေပါဝင်မှု များလွန်းလို့ပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကြိုက်ကြတဲ့ တညင်းသီးကိုလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လုံးဝ မစားသင့်ပါဘူး။ တညင်းသီးမှာ ဘာအာဟာရမှမပါတဲ့အပြင် အနံ့က အရမ်းဆိုးပါတယ်။ သာမန်လူတွေမှာတောင်...
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် အန်ခြင်း . . .
မေး. သမီးကိုယ်ဝန်က ခြောက်လရှိပါပြီ။ အရင်ကတည်းက အန်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းအန်တာ သက်သာသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ နွားနို့သောက်ပြီးရင် ပြန်အန်တဲ့အခါ နို့အဖတ်အခဲတွေ ပြန်အန်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ အခုပေါ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောက်တဲ့ နှို့မှုန်သောက်တော့လည်း နို့အခဲအဖတ်တွေ ပြန်အန်ပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်ပါလဲဆရာမ။ မတည့်လို့လား။ ၀မ်းတော့ မပျက်ပါဘူး။...
ရင်သွေးလေး ကျန်းမာသွက်လက် ဥာဏ်ရည်ထက်ဖို့ . . .(၂)
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အခုခေတ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဘယ်အချိန်ယူရမလဲဆိုပြီး လာတိုင်ပင်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး စုံတွဲတွေ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခါစ စုံတွဲလေးတွေ ရှိလာတာကို တွေ့ရတော့ ဆရာတို့ဝမ်းသာရတယ်။ ကိုယ်ဝန်မယူခင် ဘယ်လို နေထိုင်စားသောက်ရမလဲဆိုပြီး တိုင်ပင်တာက သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်လေး တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မယ့် သူတချို့က...
ရင်သွေးလေး ကျန်းမာသွက်လက် ဥာဏ်ရည်ထက်ဖို့ (၁). . .
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမယ်၊ ဘာတွေဆောင်ပြီး ဘာတွေရှောင်ရမယ် . . ဒါတွေကို ဘာဆိုဘာမှ မသိဘဲနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြတယ်၊ နောက်ဆုံးကလေးမွေးတဲ့အချိန်ကျမှ ဗိုက်ထဲကနေ ကလေးထွက်လာတယ် . . ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် ကိုးတန်းကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်က ဗိုက်နာပြီး...
ပျက်သွားတဲ့ ကိုယ်ဝန် . . .
မေး. ကိုယ်ဝန် ၄ လခွဲနဲ့ပျက်သွားတယ်။ သားအိမ်ခြစ်တာ စပျစ်ခိုင်လိုမျိုးပါလာတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆရာ။ ချစ်ချစ် (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွှန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. စပျစ်သန္ဓေ Molar Pregnancy ဖြစ်မှာပါ။ သန္ဓေသားဖြစ်လာမယ့်အစား ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ တစ်သျှူးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲကုန်တဲ့အတွက် စပျစ်ခိုင်လိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်း...
ချင်ခြင်းတပ်တာက မြေကြီးစားချင်နေလို့ . . .
မေး. ကျွန်မကိုယ်ဝန်ရှိလို့ ချင်ခြင်းတပ်နေတာက ထူးထူးဆန်းဆန်းမြေကြီးတွေ စားချင်နေတာပါ။ မစားဖို့ဝိုင်းပြောကြလို့၊ စားမိရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ခင်ခင်ကြည်၊ ဒေါပုံ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. လူဆိုတာ မြေကြီးစားတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ မြေကြီးစားရင် အစာမကြေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။...